Ny maodely Apple Watch mifanaraka amin'ny watchOS 8 | Avy amin'ny mac aho
Tamin'ny famoahana ny watchOS 7, ny Apple Watch Series 3 dia nanomboka naneho famantarana ny faharerahana. Tsy midika hoe isan'ny fiasa no tiako holazaina, efa voafetra ao aminy ihany, fa amin'ny fotoana fanavaozana ny isaky ny kinova vaovao an'ny watchOS 7 izay natombok'i Apple teny an-tsena.
Betsaka ny mpampiasa, izay anisan'ireny izaho izay noterena hamerina ny Apple Watch Series 3 avy hatrany am-boalohany mba hametrahana ny kinova farany azo jerena an'ny WatchOS 7, noho ny heverina ho tsy fahampian'ny habaka izay tsy nisy, satria na firy na firy nafana ny rindranasa nataoko dia mbola tsy nahazo ilay toerana ilaina aho.
Na izany aza, toa naniry ny hanome ny Apple Watch herintaona iray hafa i Apple, satria ny dikan-tsimbadika manaraka an'ny watchOS, laharana faha-8, dia hifanaraka amin'ny Apple Watch Series 3, ho fanampin'ny, lojika, miaraka amin'ny Apple Watch Series 4, Series 5, Series 6, ary Apple Watch SE.
Azo inoana fa ny olan'ny tsy fisian'ny toerana malalaka ao amin'ny Apple Watch Series 3 dia noho ny karazana lesoka sasany, satria ny fanavaozana ity fitaovana ity amin'ny tsirairay amin'ireo kinova vaovao an'ny watchOS 8 dia midika hoe mitohy amin'ny olana iray ihany misy fiatraikany ratsy amin'ny traikefan'ny mpampiasa, vonoy ary andao handeha.
Aleo izy io mijanona amin'ny fiambenanaOS 7 mandra-pamoakan'ny Apple fivoarana vaovao tena lehibe ao amin'ny watchOS 8, ary mifanaraka amin'ny Series 3, hamoahana ny ora sy hamerenana amin'ny laoniny ity fitaovana ity avy hatrany am-boalohany mba hametrahana ny kinova maoderina indrindra an'ny watchOS amin'izao fotoana izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny maodely Apple Watch mifanaraka amin'ny watchOS 8